पुनर्जीवनका लागि कांग्रेसले जनताको ढुकढुकी बुझ्नुपर्छ - हिमाल दैनिक
कांग्रेसले प्रजातन्त्रको मर्मलाई गहिराइसम्म आत्मबोध गरेर त्यसको नयाँ र मौलिक आयामलाई अभिबृद्धि गर्नुपरेको छ। अर्कोतर्फ, कांग्रेसको परम्परालाई अध्ययन गरी त्यहाँ रहेका आजको युग सापेक्ष नरहेका विचारलाई चटक्कै छोड्ने काम गर्नुपर्छ। विस्तृतमा
वि.सं. २००९ सालको कुरा हो, नेपाली माटोमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक आफ्नो अधिवेशन गर्दैथियो। यसअघि प्रतिबन्धितकालमा भारतमै कांग्रेसले आफ्ना बैठकहरू गर्ने गरेको थियो। बैठकमा ठूलो सहभागिता हुँदैनथ्यो। तर, ती बैठकहरूलाई नै विशेष अधिवेशन भन्ने चलन थियो।
कांग्रेसको जनकपुर अधिवेशनमा विपी कोइरालाले आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभयो। त्यतिबेलासम्म उहाँका अग्रज मातृकाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एक त पार्टीका सभापति, दोस्रो प्रधानमन्त्रीसमेत हुँदा मातृकाबाबुले चुनाव कसरी जित्ने र के गरी जित्ने भनि विशेष तयारी गरिराख्नु परेन।
विपी प्रारम्भदेखिनै आफ्नो खास किसिमको राजनीतिक शैली अपनाएर चुनाव लड्न तत्पर हुनुहुन्थ्यो। जनकपुर महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गरी उहाँले ‘हाम्रो आगामी कदम’ भन्ने एउटा लेख लेख्नुभयो। त्यो लेख त्यतिबेला कांग्रेसको मुखपत्र सरह युगवाणीमा छापियो।
त्यस लेखमा विपीले भन्नुभएको थियोः कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले देश, काल, परिस्थितिको ठीक विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। पार्टीले विश्लेषण गर्न सकेन भने ठूला ठूला पार्टीहरू पनि कालको प्रभावमा यसै बिलाएर जान्छन्। कुनै पनि पार्टी सञ्जीवनी बुटी खाएर जन्मिएको हुँदैन।
जनतालाई हत्केलामा खेलाउन नसक्दा पार्टीको मृत्यु अनिवार्य हुन्छ। जनतालाई हत्केलामा खेलाउन उनीहरुको मुटुको ढुकढुकी बुझ्नुपर्छ। त्यो मुटुको ढुकढुकी सधैँ एकनासको रहँदैन। त्यो परिवर्तित भइरहन्छ। परिवर्तन नै दुनियाँको नियम हो। नेपाली कांग्रेसले यो परिवर्तित परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो परिवर्तित परिस्थितिलाई कांग्रेसले नबुझेर लकिरका फकिर भएर पुरानै कुरा दोहोर्‍याइरह्यो भने नेपाली कांग्रेस समाप्त हुन्छ।
चीनमा कुनै समय क्वोमिन्ताङ भन्ने ठूलो पार्टी थियो। त्यो पार्टी आज चीनमा हराए सरह छ। त्यो पार्टीले चिनीयाँ समाजको गठन बुझ्न सकेन। त्यहाँको समाजको बढ्दो आकांक्षा बुझ्न सकेनन् र त्यसैले विलाउनु पर्‍यो। यही गति नेपाली कांग्रेसको नहोस् भन्ने हिसाबले म चुनाव लड्दैछु।
उपर्युक्त शब्द त्यस लेखबाट अक्षरस मैले दोहोर्‍याएको छैन। तर त्यो लेखको भाव यीनै छन्। ती लेख आज पनि मानिसले पढ्न सक्छन्।
अहिले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो संकट आएको छ भनि नेताहरुले पनि भनेकै छन्। संकटको कारण पनि खोजिँदै छ। संकटका कारणको पहिचान गरेर त्यसको निवारण हुनुपर्छ भन्ने आवाज ठाउँ ठाउँबाट आउँदैछ।
त्यो संकट के हो त?
कुनै पनि संकटको एउटा मात्रै कारण हुँदैन। त्यो तत्काल अर्कोसँग सम्बन्धित हुन्छ। एउटै कारण भन्नु पनि गल्ती हुन्छ। कुनै एउटा केन्द्रीय कारण भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको आजको अलमल, अन्यौल र कमजोरीको कारण विपी कोइरालाले औंल्याउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको झण्डै ७० वर्ष भयो। विपीले लेख्नुभएको उपर्युक्त लेख पनि ६५ वर्ष हुन लाग्यो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको २०४६ साललाई सम्झिने हो भने त्यो पनि २७ वर्ष हुन आटिसक्यो। यता आएर दोस्रो जनआन्दोलन भएको पनि झण्डै १२ वर्ष भइसक्यो। १२ वर्षलाई हामीले एक युग नै भन्ने गरेका छौं। यस एक युगमा नेपाल एकनासको छैन। साँच्चि नै भन्ने हो भने यस १२ वर्षमा नेपालमा असामान्य किसिमका परिवर्तन देखा परेका छन्।
नेपाली जनजीवनका आधारभूत तथ्य परिवर्तित भएका छन्। ती तथ्यलाई यसरी परिवर्तन गर्नु र गराउनुमा नेपाली कांग्रेसको अहम् भूमिका छ। नेकपा माओवादीले दीर्घकालिन जनयुद्वको नारा दिए। उनीहरूले त्यो जनयुद्वलाई विसौनीमा पुर्‍याउन सकेनन्। त्यसका लागि जनयुद्धका नायक प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहारा लिनु पर्‍यो। नेपाली कांग्रेसको समर्थनबिना मुलुक गणतन्त्र हुने थिएन।
नेपाली कांग्रेस समेतको पहल र नेतृत्वमा संघीय राज्य, जात जातिको आरक्षण, महिलाको आरक्षण जस्ता कदम भए। यी प्रत्येक कदममा नेपाली कांग्रेसको हात छ। तर त्यति भएर पनि नेपाली कांग्रेसले एक त यस्ता क्रान्तिकारी कदमसँग अपनत्व बोध नगरेको स्थिति देखापर्‍यो।
अर्कोतिर, यस्ता नाटकीय कदम मुलुकले किन लिनुपरेको थियो भन्ने कुराको बोध कदाचित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई भएन कि जस्तो पनि देखिन्छ।
यस पटकको चुनावी परिणामको धेरै व्याख्याहरू हुन सक्छन्। मुख्य कुरा के हो भने, द्रूतगतिले परिवर्तन भइरहेको नेपालको बढ्दो आकांक्षालाई नेतृत्वले आत्मासाथ गर्न नसक्नु अहिलेको कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको संगठन सत्ता प्राप्तिका लागि हुन्छ। तर, सत्ता प्राप्तिका तरिका पनि आ-आफ्नै हुन्छन्। हामीले सुने अनुसार, प्राचीनकालमा लिगलिग भन्ने ठाउँमा जसले सबैभन्दा छिटो कुदेर सबैभन्दा पहिले निश्चित स्थानमा पुग्थ्यो त्यही व्यक्ति राजा हुने गर्थ्यो।
पौराणिक कालमा देवी देवताको तपस्या गरेर वरदान पाएपछि मान्छे राजा भएका कथाहरु छन्। पछि राजा राजाबीचको लडाइबाट हुने गर्थ्यो। भर्खरैमात्र एक डेढ सय वर्षअघि कोतपर्वमा आफ्ना प्रतिद्धन्द्धीलाई जंगबहादुरले हत्या गरेर राजा भएका थिए। यी सबै सत्ता प्राप्त गर्ने तरिका थिए।
तर, एउटा राजनीतिक दलले सत्ता प्राप्त गर्दा भने केही निश्चित मूल्य, मान्यता, विचार र विकल्पका कुराहरु आम जनतामा प्रभाहित गरेर प्राप्त गर्ने कुरा हो।
विपी कोइरालाको देहान्त २०३९ साल साउन ६ गते भएको थियो। त्यतिबेला सोभियत यूनियन र अमेरिकाबीच कडा प्रतिस्पर्धा थियो। शितयुद्वको चर्को चरण थियो। शितयुद्वको त्यस प्रभावमा विपी कोइरालासमेत प्रभावित भइ सबैभन्दा बढी उहाँको आलोचना कम्युनिष्टप्रति लक्षित थियो। कम्यूनिष्ट फर्मुलाका लागि यिनीहरू पञ्चायतमा पसेका हुन् भन्न पनि चुक्नुभएन। त्यसको ६ वर्षपछि सोभियत यूनियन भंग भयो। सोभियत यूनियन विघटन हुनु र नेपालमा प्रजातन्त्र आउनु हाराहारीमै पर्‍यो।
नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। नेपाली कांग्रेस सत्तामा गयो। तर, हामीले परिवर्तित परिस्थितिमा नयाँ नारा विकास गर्न सकेनौं। हाम्रो एउटै नारा रह्यो, विपीको सपना साकार पार्छौँ।
विपीका सपनाका दुई पहल्वी थिए। एउटा प्रत्येक नेपालीको गास, वास र कपासको समस्या समाधान होस्। स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि नेपालीले भौंतारिनु नपरोस्। अर्को उहाँ यस मुलुकको स्थिरताका लागि सबैभन्दा बढी खतरा कम्युनिष्टसँग छ भन्न पनि चुक्नु हुँदैनथ्यो।
२०४७ सालको परिवर्तनपछि हामीले एकपटक विपीको उत्तराधिकारीलाई मूल्यांकन गर्नुपथ्र्यो। तर त्यो देखिएन। विपीको व्यक्तित्व र उचाई उहाँको मानवता, उहाँका उपलब्धीहरुको बुइँ चढेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विचारधाराको इतिहासको पर्याया बनाएर हिँड्यो। कम्युनिष्टहरुले यसबीचमा दुई वटा काम गरे।
एमाले नेता मदन भण्डारीले ४७ सालको परिवर्तन सँगसँगै जनताको बहुदलीय जनवाद जबज भन्ने एउटा नारा र दृष्टिकोण प्रतिपादन गरे। माओवादीलाई चित्त बुझेन। माओवादीले २१ औं शताब्दिको जनवाद भन्ने नारा ल्यायो। हामीले सधैँ एउटै कुरा भन्यौं, प्रजातन्त्र।
प्रजातन्त्रको अर्को कुनै विकल्प छैन। हो प्रजातन्त्रको निश्चिय पनि विकल्प छैन र अहिले पनि यसको विकल्प छैन। तर प्रजातन्त्र भनेको त एउटा फ्रेम हो। त्यो फ्रेमभित्र कस्ता सामाजिक नीति हुने, कस्तो आर्थिक नीति हुने, कस्तो राजनीति हामीले अँगाल्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसले पहल गरेर अब यो नेपालमा देश, काल र परिस्थिति अनुसार फलानो कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकेन।
यसपटक नेपाली कांग्रेसको पछाडि आम जनताको मत घटेको छैन। तर आक्रामक ढंगबाट उभिएको वाम गठबन्धनलाई जुन जवाफ दिनु पर्दथ्यो, तिमीहरुले बनाउन खोजेको नेपाल यस्तो हो र हामीले बनाउन खोजेको नेपाल यस्तो हो। त्यो भन्ने युवक हामीले बाढ्न सकेनौं। युवकहरुको भोट विवेकशील पार्टी जस्ता भर्खरै उम्रिएका पार्टीले पनि फेला पारे। कम्युनिष्टहरूको आफ्नै नारा थियो। तर हामीले हाम्रा युवा कार्यकताहरलाई अपवादबाहेक उत्साहित र उत्प्रेरित गर्न सकेनौं।
यो भन्दा मलाई सम्झना आयो, वेलायतमा लिभरल पार्टी, लेभर पार्टी र कन्जरभेटिभ पार्टीको लामो इतिहास छ। देश, काल र परिस्थितिलाई नठम्याएको कारण लिभरल पार्टी बेलैमा विलिन भयो। लेभर पार्टी र कन्जरभेटिभ पार्टीबीच झण्डै एक सय वर्षदेखि द्धन्द्वरत छन्। लेभर पार्टीको विधान जुन झण्डै २४, २५ पृष्ठको छ त्यसमा क्लज फोर भन्ने छ। लेभर पार्टीको विधानको क्लज फोरमा झण्डै झण्डै कम्युनिष्ट कार्यशैलीको कार्यक्रम थियो। रुसमा भर्खरै क्रान्ति भएको थियो। लेभर पार्टीले रुसको जस्तो क्रान्ति गर्न चाहदैनथ्यो र वेलायतमा त्यो सम्भव पनि थिएन। फलस्वरुप उसले के भनेको थियो भनेः ल्याउने त हामीले पनि समाजवाद नै हो। गर्ने त हामीले पनि राष्ट्रियकरण नै हो। तर, रूसमा रक्तरञ्जित तरिकाले त्यो गरियो। वर्ग संघर्षका माध्यमबाट गरियो। हामी क्रान्तिमा होइन चुनावमा विश्वास गर्छौ।
हामी सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादमा विश्वास गर्दैनौं, हामी भोटमा विश्वास गर्छौ। भोटबाट बेलायतको संसदमा बहुमत ल्याइसकेपछि हामीले पनि देशका सबै कारखानाहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्छौँ। हामीले पनि सबै अधिकार मजदूर वर्गलाई दिन्छौं। हामीले पनि पूँजीलाई नियन्त्रण गर्छौं र सच्चा समाजवाद ल्याउँछौं। हाम्रो समाजवादमा प्रजातन्त्र रहन्छ।
उपर्युक्त धारणालाई लिएर लेवर पार्टीभित्र सधैँ बहस भइराख्यो। हामी र कम्युनिष्टमा फरक नै भएन। यो धारणा बदल्नु पर्छ भन्ने भयो। तर पुरातनपन्थीहरुले यो धारणा बदल्न चाहेनन्। बेलायतमा लेवर पार्टीलाई नवजीवन दिने भनेर चिनिएका टोनी ब्लेयरले यो धारणालाई बदल्न सके र सफलता प्राप्त गरे। तर, यो त्यसै बदलिएन।
बेलायतको राजनीतिमा टोनी ब्लेयरको योगदान के थियो? उनले गरेका काम ठीक थिए वा थिएनन्, म यो अहिले भन्न चाहन्नँ।
नेपाली कांग्रेसलाई नवजीवन दिने शिलशिलामा बेलायतमा टोनी ब्लेयरको नेतृत्वमा लेवर पार्टीले नवजीवन प्राप्त गरेझैं कांग्रेसलाई पनि नवजीवन दिनुपर्छ भन्ने मेरो संकेत हो। त्यसका लागि कांग्रेसको सारा इतिहास हामीले केलाएर हेर्नुपर्छ। यसले बहन गरेको विचारधारा हेर्नुपर्छ।
यी विचार धारा र यसको परम्परामा के कस्ता ओजस्वी तत्व छन् त्यो हेर्नुपर्छ। र ती वोजस्वी तत्वमा टेकेर यसको श्रृजनात्मक विकास गर्नुपर्छ। यो श्रृजनात्मक विकास गर्ने क्रममा के देख्छु भने, विपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा वैकल्पिक तस्विर दिनुभएको थियो। उहाँले वारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेपालको विकास भनेको गाउँको विकास हो। नेपालको विकास भनेको ठूला ठूला सडक, ठूला ठूला हवाइजहाज अड्डा होइनन्। नेपालको विकास भनेको सर्वप्रथम यहाँका गाउँले जनताको उदाहारण थियो। विपीले गाउँको उदाहारण दिँदै हलो जोतिरहेको गाउँले किसानको तस्बिर राख भन्नुभएको थियो।
आज पनि यान्त्रिक रूपले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। त्यतिबेलाको समयमा उहाँले त्यो भन्नु भयो। आज के गर्दा विदेशमा गएर कुटो कोदालो गर्न बाध्य भएका हाम्रा लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई फर्काउन सकिन्छ?
कसरी उनीहरुको श्रमको सदुपयोग मुलुकले गर्न सक्छ? कसरी प्रजातन्त्रमाथि चारैतिरबाट आघात आइरहेको यस घडिमा हामीले प्रजातन्त्रलाई साँचो अर्थमा स्वतन्त्रताका पर्याय बनाउन सक्छौं?
हालैको कान्तिपुरमा एउटा हेडलाइन छापिएको थियो- एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नु भएको छ अब एकताको विषयमा कसैले बोल्न पाउँदैन। के यो स्वतन्त्र वाणी र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथिको प्रतिबन्ध होइन? कसैले भन्ला, यसलाई ओलीको आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या हो। कुनै पनि मुलुकमा मुलुकभित्र वा बाहिरको प्रतिबन्ध अथवा पार्टीभित्रको प्रतिबन्ध अलग अलग हुँदैन।
पार्टीभित्र स्वतन्त्र स्वर दब्यो भने समाजमा द्धन्द्वको श्रृजना हुन्छ। त्यस्तै अर्को घटना पनि भएको छ। केही कुरा उनले बोले अथवा लेखे भने डाक्टर गोविन्द केसीलाई रातारात तत्परतापूर्वक अदालतले कारबाही गरेर हिरासतमा पुर्‍याएको छ। अब ओलीको निशेध र गोविन्द केसीको अदालती गिरफ्तारीका धेरै पहलवीहरु छन्।
गोविन्द केसीको राजनीतिमा पनि धेरै चरित्रहरु छन्। गोविन्द केसीको जस्तो अनसन पनि स्वस्थ राजनीति होइन। यसबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ र बहसको विषय बन्न सक्छ। तर, यी दुबै घटना प्रतिकात्मक रुपले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका उपर प्रहार हुन्। यस प्रहारलाई नेपाली कांग्रेसका युवा कार्यकर्ताले आत्मासाथ गर्न सक्नुपर्छ। र प्रजातन्त्रको साँचो अर्थमा कुनै पनि प्रकारका विचार र सोचका उपर कुनै प्रकारको प्रहार हुँदा बोल्न सक्ने शक्ति कांग्रेसका कार्यकर्तामा हुनुपर्छ। यसले एउटा प्रेरणात्मक अभ्यासको अपेक्षा राख्दछ।
हामीले यसको वास्तविक पहल पनि हेर्नुपर्छ। कांग्रेसले प्रजातन्त्रको मर्मलाई गहिराइसम्म आत्मबोध गरेर त्यसको नयाँ र मौलिक आयामलाई अभिबृद्धि गर्नुपरेको छ। अर्कोतर्फ, कांग्रेसको परम्परालाई अध्ययन गरी त्यहाँ रहेका आजको युग सापेक्ष नरहेका विचारलाई चटक्कै छोड्ने काम गर्नुपर्छ।
त्यहाँ रहेका सार्थक विचारलाई आजको देश, काल र परिस्थितिका हिसाबले आजका नेपाली युवाहरुको मनोभावनालाई ध्यानमा राखेर श्रृजनात्मक विकास गर्नु पर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै विपी कोइरालाले कांग्रेसको जनकपुरको पाँचौ अधिवेशनमा देखाउनु भएको चेतावनी पनि सार्थक हुन्छ र केही भिन्न परिप्रेक्षमा टोनी ब्लेयरले वेलायतको लेवर पार्टीको नविकरणमा गरेको प्रयासले पनि हामीलाई प्रेरणा दिन्छ।
गिरीको लेख अब हरेक पाक्षिक नियमित प्रकाशन हुन्छ- सम्पादक
11/01/2018, 07: 34: 24 मा प्रकाशित
20161 पटक पढीएको